Foomka Cabashada Kiraystaha
Foomkan waxaa loogu talagalay kaliya kireystayaasha doonaya inay sii kireystaan laakiin milkiilahooda ayaa weydiisanaya inay ka baxaan inta lagu jiro xaaladda degdegga ah. Dhammaan cabashooyinka kale waa in lagu soo gudbiyaa iyadoo la adeegsanayo Foomka Codsiga Kaalmada Macaamiisha.
Dr. Ind. Mr. Mrs. Ms. Mx. Rev. None Prefix Magaca hore Magaca dambe Suffix
Cinwaanka wadadaada *
Cinwaanka wadadaada (Safka labaad)
Koodhka boostadaada *
Lambarka taleefankaaga *
Lambar taleefan kale
Milkiilaha guryaha aad cawday
Fadlan sida ugu macquulsan ugu wargal milkiilaha si aan ula xiriirno asaga ama ayada.
Magaca milkiilaha aad ka cabaneyso *
Qofka lala xiriiraya haddi ay ka duwan tahay milkiilaha (maareyaha guryaha)
Cinwaanka milkiilaha guryaha
Cinwaanka milkiilaha guryaha (safka labaad)
Emaylka milkiilaha guriga
Miyaad jeceshahay in xafiiskaan inuu la xiriiro mulkiilaha adiga ku matalayo? *
Bixi faahfaahinta ugu badan. Fadlan ku soo lifaaq koobi ogeysiis kasta oo aad ka heshay milkiilaha gurigaaga.
Mulkiilaha guriga ma bedelay qufulkaaga ama ma kaa jaray korontada sii uu kaaga saaro guriga?
Mulkiilaha guriga ma ku siiyay taariikh guriga aad ka baxdo?
Hadday haa tahay, taarikhdee ayuu mulkiilaha guiriga sheegay inaad guriga ka baxdo:
Sharraxa dhibaatada *
Xadka Erayga Ugu Badan: 1,000 eray 0/1000
Maxaad dooneysaa inuu mulkiiluhu sameeyo? *
Xaddiga guud ee xaddiga cabirka: 10 MB. Noocyada faylasha la aqbalay: pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, mp3, wma, mpg, flv, avi, jpg, jpeg, png, gif Cancel of
Saxeexista hoosta, waxaan oggolahay oo oggolaanayaa in macluumaadka aan bixiyo ay u istcimaali karaan ama ku faafi karaan Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Minnesota: (a) si loo xalliyo arrinta aan la xiriiray Xafiiska, oo ay kujirto la xiriirida qofkasta ama cidda ka cawday; (b) inay ila xiriiraan; (c) wakaaladaha kale ee xoojinta sharciga iyo / ama wakaaladaha ka caawiya macaamiisha; iyo(d) haddii kale gacan ka gaysato dhaqan-gelinta sharciga. Marka laga reebo sida kale ee oggolaanshahaan oggolaaday, waxaan fahamsanahay in macluumaadka aan bixinayo loola dhaqmi doono sidii “xog gaar ah oo shaqsiyadeed” sida ku xusan Sharciga Dhaqanka ee Xogta Dowladda ee Minn. Stat. ch. 13, loomana isticmaali doono mana faafin doono marka laga reebo sida uu fasaxay sharciga ama qaanuunka kale ee gobolka ama federaalka. Waxaan fahansanahay inaan sharci ahaan la iiga baahnayn inaan bixiyo macluumaadka aan ku soo gudbiyey foomkan, laakiin in haddii aan sidaa ku fududaado in sidaas la sameeyo ay adkaan karto in la xalliyo welwelkayga. *
Hadaad rabto koobi daabacan oo foomkaaga ah, fadlan dhagsii "Foorm Daabac" kahor intaadan gudbin.